Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae failed ဖြစ်မှာ မပူတော့နဲ့။ ဒီမှာလာပြီ Huawei Stock Recovery Installer : Myanmar Mobile Software Developer
February 10, 2013 | 105 Replies
Category: Firmware တင်နည်းများ, Recovery Mode ထည့်နည်းများ
နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပျင်းလို့ လုပ်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာပေးနေတာ။ ဘယ်သူမှ အားမပေးချင်နေ။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာနဲ့ပဲ ဆက်လျှောက်မယ်။ Subscribe
Soe Lin Tun says: February 10, 2013 at 1:04 pm ဆိုင်သမားတွေအတွက် အတော့်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်… ခုလို ကြိုးစားပန်းစား ရှာဖွေကြံဆပေးတဲ့အတွက် .. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
Reply tinkoko says: February 10, 2013 at 10:12 pm ကျေးဇူးပါအကို
Reply kyarche says: February 11, 2013 at 1:02 am ကောင်းတယ် good ဗျာ
u9200 p1 firmware လေးလိုချင်တယ်ဗျာ.လင့်လေးရှာပေးပါအုံးနော်အကို
Reply PhoeThar says: March 23, 2014 at 9:09 pm This is the link (s) for all the firmwares, upgrades, EMUI download etc.. for Huawei Ascend U9200 P1. Enjoy !!!
Reply sai min says: February 11, 2013 at 5:39 am ခုလိုလေးရှင်းပြတာတိုင်းကျူးပါ
Reply BooMBoxx says: February 11, 2013 at 10:15 am C8950D ရောမပါဘူးလားဟင်…
Reply Solo says: February 12, 2013 at 7:41 am I like it. But I also want C8650+ for firmware and recovery mode. Could you please upload? I really appreciate for what you’ve done.
Reply TUNAUNGKYAW says: February 12, 2013 at 8:08 am ကျေးဇူးပါ
Reply U Kyaw says: February 12, 2013 at 1:11 pm အားပေးလျှက်ပါ
Reply kophyo says: February 13, 2013 at 6:14 am ကျေးဇူးပဲ အကို အဲ့လိုတန်ဖိုး ရှိတာလေးတွေတင်ပေးပါအုံး.
Reply kyawswar says: February 13, 2013 at 1:42 pm ako t8950 stock recovery.img and boot.img lay lo chin lo par/t8950 official rom pyan tin lo ma ya lo par please help me
Reply spacephai says: February 14, 2013 at 12:03 pm အကိုဖြိုးချမ်းခင်ဗျာ ကျွန်တော် U 9200 ကို Official Firmware B124 ကို ပြန်တင်တာ
Volume down+voluem up+ power နှိပ်ပြီးတင်တာ Recovery Mode ထဲပဲပြန်ပြန်ရောက်သွားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါဦးခင်ဗျာ
Reply ko naing says: February 15, 2013 at 12:42 am ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Reply zayar kyaw says: February 18, 2013 at 10:49 am ကျေးဇူးတင်ပါအကိုရေး အရမ်းကိုအဆင်ပြေတယ်။
Reply Thet Naing Oo says: February 20, 2013 at 9:08 am အရမ်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Reply goldhair says: February 21, 2013 at 9:34 am ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်လည်းတင်ပေးအုံးနော်
Reply ကောင်းဆက် says: February 22, 2013 at 9:27 am အစ်ကို အဲဒီ software က ကြာလားဟင် ကျနော် U8818 လုပ်ကြည့်တာ အကြာကြီးပဲ ဘယ်တော့မှ ပြီးမှာလဲ မသိဘူးနော် အစ်ကို တစ်ချက်လောက် ကျနော်ကို ပြောပြပါလား အ၇မ်းအရေးကြီးနေလို့ပါနော် ကျေးဇုးပါပဲခင်ဗျာ
Reply ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) says: February 22, 2013 at 3:24 pm မကြာပါဘူးမှားနေပြီထင်တယ်..
Reply tumai says: January 1, 2014 at 4:07 am huawei y 220 t logo မှာရပ်နေတယ် ကူညီပါဦ
Reply phone naing says: February 22, 2013 at 5:59 pm think you
Reply chris says: February 23, 2013 at 5:35 am အားပေးလျှက်ပါ
Reply htet ahkar says: February 24, 2013 at 4:19 pm G510 အတွက် stock Rom တင်တာ update Failed ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒါလေးအတွက်ရော ရမလားဗျာ။ ကူညီပါဦး။
Reply aunga825 says: February 25, 2013 at 2:54 am very thank Please your ph very very thank brother
Reply kophyo says: March 4, 2013 at 8:49 am စေတနာအကျုိုးပေးမယ်.အကိုပါ
Reply pgo says: March 8, 2013 at 6:39 pm အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ဗျာ
Reply ကိုနိုင် says: March 9, 2013 at 10:47 am ကျွန်တော် က waiting device မှာရပ်နေလို့ အကို တို့ ရေ လုပ်ကြပါအုံး ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ
Reply zawminnhtike says: March 10, 2013 at 3:13 am like & thank bro
Reply si thu soe says: March 23, 2013 at 7:17 am တျေးဇူးတင်ပါတယ် တော်တော်လေးအထင်ပြေပါတယ်
Reply si thu soe says: March 23, 2013 at 7:18 am တျေးဇူးတင်ပါတယ် တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်
Reply Aung Than Oo says: March 31, 2013 at 1:22 pm ကျေးဇူးပါ အကို အစဉ် လေးစားလျှက်ပါ အကို……
Reply soethutun says: April 5, 2013 at 8:40 am thanks…..
Reply ko zaw says: April 5, 2013 at 1:48 pm ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ကတော့ မကွေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ software တော်တော်များများ အစဉ်မပြေတာတွေ များခဲ့တယ် ဒါပေးမယ့် အခု အစ်ကို firmware တွေက အစဉ်ပြေပါတယ်
Reply Kyaw Ye says: April 7, 2013 at 11:00 am C8800 firmware တင်တာ fail ပြနေတယ်…. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…. အရေးကြီးလို့ပါဗျာ…. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်……..။
Reply Aung than oo says: April 22, 2013 at 11:19 am လေးစားလျှက်ပါ….
Replyုko gyi says: April 22, 2013 at 11:37 amံHUAWEI U8818 ICS မြင့်ထားတယ်အကို root လည်းလုပ်ပြီးပြီ ဒါမေမယ့် စက်ကဟမ်းနေတယ် ဘယ်လိုမှသုံးလို့မရဘူးအကိုရေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပေးပါအုံး
Replyုko gyi says: April 22, 2013 at 11:42 am logo လည်းတက်မလာဘူးတစ်ခါတစ်ခါသုံးရင်းနဲ့ဟမ်းသွားသေးတယ် ပြီးနောက်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး နည်းလမ်းလေးရှိရင်ပြောပါအုံး အစ်ကိုရေ ကျေးဇူးတင်လျှက်
Reply Thet Lwin Oo says: May 1, 2013 at 7:35 pm အကိုရေ ကူညီပါအုန်း အနော့် ရဲ့ T 8833 က firmware ပြန်တင်တာ တင်လိုမရလို့ပါ
root လဲ လုပ်ထားတယ် အကို ဘာဖြစ်လိုလဲမသိဘူး ကူညီပါအုန်း
Reply moonmoon says: May 2, 2013 at 9:06 pm ကျေးဇူးကြီးပဲ တင်နေရတာ အားနာလိုက်တာဗျား။ အပြင် တစ်ခါလောက် ဆုံမယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းလေးကို ကျွေးမွေးချင်ပါတယ်ဗျား။ ဖား တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အများအတွက် စေတနာထားပြီး ကူညီတဲ့စိတ်ကို လေးစားလို့ပါ။
ဒိ့ထက်မက ထူးချွန်တဲ့ ကံအကျိုးကို တောင်းတတိုင်း ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျား။
Reply thiha says: May 15, 2013 at 9:19 am when i install cwm to my ph u8818 , replyamessage @ computer screen “command not allowed” and restart my ph
recovery not pass
Reply hanlay says: May 22, 2013 at 10:34 am U8818 ဆိုရင် bootloader Unlock ဖြည်ထားပေးမှ ရပါမယ်ခင်ဗျာ။
Reply aungkhinzaw says: May 22, 2013 at 5:02 am how to do please
Reply firmware says: May 28, 2013 at 11:36 pm ကူပါအုန်း ကျနော်ကတရုတ်လိုင်းသုံးတော့ hotfile တို့ဘာတို့ကိုဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ဘယ်ထဲသွားပြီးတောင်းလိုရလဲ သိရင်ပြောပြပါအုန်း
Reply PhoeThar says: March 23, 2014 at 9:13 pm Try to use Hotspot Shield Or Any Other VPN services…
Reply adroid 4.1.2 firmware mm font says: May 28, 2013 at 11:40 pm mm font ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး ကူပါအုန်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
Reply Thanhtetaung says: May 29, 2013 at 6:35 pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ….အဆင်ပြေပါတယ်
Reply yelinthu says: May 31, 2013 at 1:14 pm bro! T 8951 ko kaw bal lo recovery lote ya ma lae bya!
Reply minthweyint says: June 3, 2013 at 12:27 am ကျေးဇူးပါအကို နောက်လည်းအများကြီးသင်ပေးပါဦးနော်
Reply မင်းမင်း says: June 5, 2013 at 7:11 pm C8813D အတွက်ရှိလားခင်ဗျာ..ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါ
Reply winnaing says: June 13, 2013 at 5:57 pm ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုင်တွေအတွက်တော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါဗျာ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
Reply nyinyi says: June 22, 2013 at 2:57 am c8813အတွက်ရောရှိလားလိုချင်လို့ပါ
Reply အာကာကျော် says: June 27, 2013 at 9:44 pm အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply amjack08 says: June 29, 2013 at 12:11 pm thank you so much …………….
Reply weijilwpa says: July 3, 2013 at 11:49 pm အကို c 8813dအတွက် ကော ရှိ လား အကို
Reply့ htunlin says: July 9, 2013 at 1:20 am ကျွန်တော့ဖုန်းy210-2010ကfirmwareတင်တာ E:signature verification failed လို.ပြနေတယ်ဗျာကူညီပါအုံးဗျာ အရေးကြီးနေလို.ပါ
Reply Micro says: July 16, 2013 at 5:17 am C8813D က 10 စက္ကန့်လောက် ကြာရင် တစ်ခါ Reboot ဖြစ် ဖြစ်နေလို့ Firmware ပြန်တင် တာလည်း step2မှာ Error ဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်၇မလဲအကို အဆင်ပြေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေး ပြောပြပေးပါ
Reply channyeinthwin says: August 28, 2013 at 12:53 am အဲဒါက Memory ကတ်မကောင်းရင်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..Memory ကတ်ကို ပြောင်းကြည့် လိုက်ပါ…အဆင်ပြေသွားပါလိမ့် မယ်…
Reply kyawlinn says: July 20, 2013 at 3:23 am thank u thank u so much brother.
Reply wailyan21 says: July 25, 2013 at 1:10 pm အကိုရေ c8812 ကို firmwere တင်တာ အကုန်ပြီးတယ် start logo မှာရပ်နေပီးမတက်တော့လို့ ကူညီရှင်းပြ ပေးပါအုန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply suehtet says: September 23, 2013 at 1:25 pm B169 နဲ့ဆုံးတဲ့ c8813 firmware တင်လိုက်ပါအဆင်ပြေပါတယ်
Reply 295chittal says: August 9, 2013 at 4:24 pm ကျေးဇူတင်ပါတယ် အကို
Reply 295chittal says: August 9, 2013 at 4:28 pm ဖုန်းသင်တန်းတက်ခါစမို့ အကူအညီလိုရင် ပြောပေးပါအုံးနော် အကို
Reply aye min oo says: August 12, 2013 at 11:47 pm pleace how to root c8813
Reply U Htin Kyaw says: August 16, 2013 at 11:31 am ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
Reply kyaw swar says: August 20, 2013 at 2:52 am ကျေးဇူးတင်ပါယ်ဗျာ အားလဲကိုးပါတယ်
Reply ko aung says: August 25, 2013 at 11:14 pm ဖုန်းကBRAND မရှိတဲ့ china Android ဖုန်းပါRECOVERY MODE မှာစာတန်း ၇ ကြောင်း ပေါ်ပါတယ် အပေါ်ဆုံးနှစ်ကြောင်းထဲက အရေးကြီးတဲ့ FACTORY RESET စာတန်းထဲဝင်လို့မရဖြစ်နေတယ်။အဲဒါ User lock ဘယ်လိုဖြည်ရမလဲ firmware ကောဘယ်လိုတင်ရမလဲ USB debugging လဲမ on ပါ ။ ကျွန်တော်ကဆိုင်သမားပါ အဲဒီဖုန်းအမျိုးစားတွေ firmware တင်ဖို့အခက်တွေ့နေလို့ပါ။ မြန်မြန်လေးဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ် ဖုန်းဆက်မေးလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဖုန်းဆက်ချင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉၄၃၀၀၃၉၂၅ ပါ ။ အခုလိုပို့တွေဖတ်ပြီးအသိပညာတွေတိုးတတ်တာအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အစ်ကိုလဲဒီထက်မက အသိပညာတွေကြွယ်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Reply channyeinthwin says: August 28, 2013 at 12:50 am အကိုရေ အဲကောင်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ သုံးရတာက CWM နဲ့Update လုပ်ပူုံမျိုးပဲလား….ရိုးရိုး Hauwei ဖုန်းတွေကို Firmware တင်ပုံမျိုးပဲလား..ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ လေးပြောပေးပါဦး..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အကိုတို့ ကို
Reply bobo says: September 2, 2013 at 4:38 pm passwords? pls
Reply linlin says: September 7, 2013 at 10:10 am အကိုpasswordကဘာလဲတောင်းနေတယ်
Reply wai yab says: September 8, 2013 at 3:49 pm အကိုတို့ေ၇ကျွန်တော်ဖုန်းCustomတင်လို့firmwareရှာပေးကြပါဦးနော် ကျွန်တော်ဖုန်းကu8660ပါ
Reply thantzin says: September 10, 2013 at 11:22 pm please my brother Huawei G 610S FIRMWARE PLEASE help me
Reply Ahputu says: September 12, 2013 at 9:32 am အကို ကျွန်တော့် မှာ U8818 လေးတစ်လုံး သုံးနေရင်းနဲ့ သူ့အလိုလို power ကျသွားပီးတော့
ပြန်ဖွင့်တော့ မတက်တော့ဘူး 3G screen မှာရပ်နေတယ်၊ firmware တင်တာလည်း step2fail ဖြစ်တယ် Huawei flash tool နဲ့လည်းမရဘူး လုပ်ပေးပါအုံးဗျာ
Reply suehtet says: September 23, 2013 at 1:27 pm Firmware 4.0.3 ကိုတင်လိုက်ပါ
Reply thanmoe says: September 13, 2013 at 9:19 am ako , thinkyou par . goodday par.
Reply kophyo says: September 18, 2013 at 10:28 am G510 recovery လေးရောမရှိဘူးလားအကို
Reply suehtet says: September 23, 2013 at 1:29 pm [email protected] VVVfacebook မှာကိုပေါက်ဆီကကူးတင်ထားပါတာလင့်ရှိပါတယ်
Reply စီနီယာ ငရဲသား says: September 30, 2013 at 9:10 am Thanks for all … အစ်ကိုတို့တင်ပေးတာ တွေ အရမ်းအသုံးဝင်တယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဗျာ
Reply ​မောင်​​မောင်​သဲ says: October 2, 2013 at 12:03 am ကျွန်​​တော်​က အားက်ိုးတယ်​အကိုတို့ကို တကယ်​​ပြောတာပါ လူမမြင်​ဖူး​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​ဆရာတစ်​ဆူလို့သ​ဘောထားတာပါ
Reply Kosaimdy says: October 3, 2013 at 6:57 am updtae failed ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ အကိုပေးတဲ့လင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Reply moonmoon says: October 10, 2013 at 5:14 pm ကျွန်တော်လည်း သိချင်ပါတယ် လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပြောပြပါခင်ဗျား။
Reply mckomyat says: October 4, 2013 at 2:58 am ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ပညာဆိုတာ သေရွာမှ မပါဘဲ။ ကျွန်တော်က နည်းပညာမျှဝေသူတွေကို အရမ်းနဲ့ လေးစားတယ်ဗျ။ အချိန်နဲ့ ငွေ မတတ်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့လို နယ်သမားတွေအတွက် အရမ်းနဲ့ တန်းဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာတွေပဲ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြန်မျှဝေပေးပါမယ်။ ကျေးဇူးအနန္တပါဗျာ..
Reply moonmoon says: October 10, 2013 at 4:54 pm ကျွန်တော် huawei U8661 ကို မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့ Vroot နှင့် root ပြီ Myanroid v1.3 နှင့် င်္Frozen Keyboard ကိုသွင်းတဲံ့အချိန်မှာ ဖုန်းက Firmware ပြန်မတက်လာတော့ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါနှင့် ကျွန်တော် Firmware (B827) ကို ပြန်တင်တော့ update step2failed ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒါနှင့် huaweiStockRecoveryInstaller နှင့် လုပ်ကြည့်ပါသေးတယ်။မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ညံ့လို့ဖြစ်ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ huaweiStockRecoveryinstaller သွင်းဖို့အတွက် vol down နှင့် power key တွဲနှိပ်ပြီးမှ usb ကြိုးထိုးချိတ်ပါတယ်ပြီးမှ နံပါတ် ၃ ကို နှိပ်ပြီး inter ကိုခေါက်ပါတယ်။ recovery ok သွင်းနေတာတွေပြပါတယ် စက္ကန့်တွေပြပါတယ်။ ပြီးတော့မှ firmware ပြန်တင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် step2မှာ failed ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးလို့ရရင် ကူညီပါဦးခင်ဗျား။ http://[email protected] ကျွန်တော့် အီးမေးလ်ပါ ကူညီပါဦးဗျား အရမ်းအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါ။
Reply moonmoon says: October 10, 2013 at 5:12 pm thank you
Reply moonmoon says: October 10, 2013 at 5:17 pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply thiketun says: October 23, 2013 at 6:31 pm ကျနော်လည်း အဲအစ်ကို(moonmoon)အတိုင်းပဲ ကျနော့်ဖုန်းက huawei C8815 cdma တစ်ကဒ်သုံးပါ ။update step2failed ဖြစ်နေတယ်။ huaweiStockRecoveryInstaller နှင့် လုပ်ကြည့်ပါသေးတယ်။မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ huaweiStockRecoveryinstaller နဲ့သွင်းဖို့အတွက် vol down နှင့် power key တွဲနှိပ်ပြီးမှ usb ကြိုးထိုးချိတ်ပါတယ်ပြီးမှ နံပါတ် ၃ ကို နှိပ်ပြီး inter ကိုခေါက်ပါတယ်။ recovery ok သွင်းနေတာတွေပြပါတယ်။စက္ကန့်တွေပြပါတယ်။ ပြီးတော့မှ firmware ပြန်တင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် step2မှာ failed ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးလို့ရရင် ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။[email protected] ကျွန်တော့် အီးမေးလ်ပါ ကူညီပါဦးဗျာအရမ်းအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါ။
Reply aungkokooo says: December 20, 2013 at 2:37 pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မလို့ ပါ
Reply Thz says: December 22, 2013 at 3:57 pm C8815 CDMA တစ်ကဒ်သုံး C8815V100R001C541B135 မှာလည်း step2မှာ fail ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်..ဘယ်လိုမှ Firmware ပြန်တင်မရဘူးခင်ဗျာ..ကူညီကြပါဦး…
Reply zin myo says: December 25, 2013 at 11:03 am c8813 b175 Firmware ရှိရင်တင်ပေးပါလားအကို ။
Reply သုတ says: December 25, 2013 at 8:00 pm အကို
c8850 က Step2error ဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မေးကို လင့်ပို့ပေးထားပါ ကျေးဇူးတင်လျှက်
Reply kyauksir says: December 25, 2013 at 11:37 pm Huawei G610 C00 imei is gone. How can I back ?
Reply lamintun says: December 29, 2013 at 1:03 am thank you
Reply zawlin says: December 29, 2013 at 4:24 pm Thank Brother
Reply zaw win htwe says: December 29, 2013 at 7:22 pm အကိုရေ c8812 firmware တင်တာ step2မှာ fail ပဲ ပြနေတယ် version တွေလဲစုံပြီ firmware တင်တာ sd ကဒ်လဲ နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြောင်းပြီးပြီ။ ဘယ်လိုမှ မရဘုး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါအုန်းဗျာ။
Reply salaisanni says: December 30, 2013 at 4:50 pm ဟုတ် ကျေးဇူးပါ နောက်လဲကူညီပါနော် ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ
Reply KKMIN says: January 1, 2014 at 5:25 pm Lg F160S Firmwae ရရင်ပြောပါဦး…Logo မှာရပ်နေလို့ပါ
Reply Johnny han says: March 1, 2014 at 1:10 am မွန်​မြတ်​စိတ်​ထားကို​လေးစားပါတယ်​ friend
Huawei C8815 frimware ပြန်​တင်​တာ
Reply paing lay says: March 2, 2014 at 11:08 am အကိုရေ Y300-0000 အတွက်ရောသုံးလို့ရသလားမသိဘူး။ကူညီပါဦး။custom တင်ချင်လို့၊အဲဒါဘာကကောင်းလဲဆိုတာလည်းလမ်းညွှန်ပေးပါဦး
Reply kta says: March 20, 2014 at 12:11 am huawei s3000 လေးတင်ပေးပါလားဗျာ
Reply kta says: March 20, 2014 at 12:15 am hualu s 3000ပါ မှားလို့ဘော်ဘော်ရေ
Reply waiyan says: April 3, 2014 at 7:11 pm အကို .hualua s3000 ကျနိ​တော်​ ဆီ မှာ လဲ တလုံး ဘယ်​လို မှာ link ရှာ မ​တွေ ဘူး အကို ရရင်​ ကူညီပါ အုံး
Reply everlove66 says: March 22, 2014 at 12:59 pm U9200
Reply everlove66 says: March 22, 2014 at 1:02 pm A KO U9200 GOOGLE PLAY STORE LOTE PAE PAR TU
Reply Aung Thu says: March 22, 2014 at 3:14 pm Huawei G520 အတွက်ရှိရင်တင်ပေးပါဗျာ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply wonyan says: March 31, 2014 at 10:12 am Thanks…………..
Reply NAY says: April 7, 2014 at 12:00 pm Thank you so much brother Reply ko moe says: May 20, 2014 at 1:44 am ကြုံဖူးတဲ့ အကိုများရှိရင် ကူညီကြပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော် U8661 ကို B182 firmware တင်တာ မရလို့ဆိုပြီး SD card slot ပျက်တဲ့ဖုန်းတွေတင်တဲ့ Multi tool နဲ့တင်လိုက်တာ firmware update mid way failed လို့ပေါ်လာတယ်ဗျ ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီး ပါဝါဖွင့်လိုက်တော့ နဂိုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းရောင် screen ပဲပေါ်နေတယ်။ ဘာလုပ်လုပ်မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် အကြံပေးကူညီကြပါဦးဗျာ ။